काठमाण्डौ – मंगलबार ओमानी रियाल र कोरियन वनको भाउ बढेको छ भने अन्य विदेशी मुद्राको भाउ घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार १ अमेरिकी डरलको खरिददर ११३ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ४३ पैसा तोकेको छ । सोमबार यसको १ को खरिददर ११३ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ४५ पैसा थियो ।
साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ५० पैसा तोकेको छ । हिजो यसको खरिददर ३० रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको थियो । कतारी रियाल १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ४३ पैसा तोकेको छ ।
सोमबार यसको १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ४३ पैसा थियो ।यस्तै, ओमानी रियाल १ को खरिददर २९८ रुपैयाँ तोकेको छ । हिजो यसको खरिदद २९४ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको थियो । आज यूएई दिर्हाम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । हिजो यसको खरिददर ३१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको थियो ।
मलेसियन रिंगिट १ को खरिददर २७ रुपैयाँ ६७ पैसा र र बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ८१ पैसा तोकेको छ । सोमबार यसको १ को खरिददर २७ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको थियो । कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ५९ पैसा तोकेको छ । सोमबार यसको खरिददर ९ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ५७ पैसा थियो ।
कुवेती दिनार १ को खरिददर ३७४ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३७६ रुपैयाँ ११ पैसा तोकेको छ । हिजो यसको खरिददर ३७४ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ३७६ रुपैयाँ ७३ पैसा थियो ।यस्तै आज बहराइन दिनार १ को खरिददर ३०१ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ३०३ रुपैयाँ ५३ पैसा तोकेको छ । सोमबार यसको खरिददर ३०१ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ३०३ रुपैयाँ ५५ पैसा रहेको थियो ।
कोरियामा कम सुत्ने बानी छ? लाग्न सक्छन यस्ता भयानक रोगहरु ! (पुरा पढनुहोस)